Oracle Inosheedzera End of Java Plugin | Linux Vakapindwa muropa
Adobe yakave nematambudziko mazhinji ekuchengetedza neFlash yayo, kutsamira kwakanyanya pairi paInternet kwakamanikidza vashandisi kuti vaiise pamakomputa avo kuitira kuti vaone zvemukati zvinoenderana neiyi browser ye plugin. Nekudaro, zvikanganiso zvakaitwa mukusimudzira kwayo zvakagadzira huwandu hukuru hwemakomba ekuchengetedza ayo anogona kushandiswa kukanganisa Flash michina, ichiunza kupera kweFlash padyo nepamberi peiyo ramangwana.
Oracle, yechikamu chayo, yakatenga Sun Microsystems uye saka ndiye muridzi wazvino weJava plugin, imwe yeanotungamira paInternet. Asi HTML5 yaunza tariro uye pamwe zvese zviri zviviri Java neFlash hazvichadiwe. Saizvozvo, Oracle yazivisa kuti muna Kubvumbi iyo Java plugin inomira kuvandudza, kugumisa iyi plugin kune mabhurawuza, kuvhara iyo kutenderera iyo, seAdobe ine Flash, yanga isiri mubhedha wemaroses.
Java yakave iri, seFlash, chimwe chezvinangwa chikuru zvekurwiswa, kukanganisa kuchengetedzwa kwemidziyo. Kuzivikanwa kweJava kwakaita kuti varwisi vemakomputa vaone sechinhu chine muto zvakanyanya, zvichikonzera kusagadzikana kutsva nematambudziko kufumurwa kweOracle mune ino kesi, ini ndinoomerera, ingangoita nzira yakafanana yeAdobe ine Flash, ese ari maviri masisitimu ari pamusoro paInternet, asi kuti kwatove nevamwe vakuru vakavaramba.
Zvino na HTML5, vanogadzira vari kutema Java uye Flash-based tekinorojiUye zvakare, matambudziko mazhinji ekuchengetedza aya haana kubatsira vanogadzira kuti varambe vachikurudzirwa kushandisa matekinoroji aya. Zvino, ese mawebhusaiti ayo akavakirwa pahunyanzvi uhu, seakawanda ehushumiro kutaura zvimwe zvakakosha zvinoshandisa Java kusaina zvinyorwa, nezvimwe, vanofanirwa kutsvaga imwe nzira yekuenderera mberi nekushanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Oracle inozivisa kupera kweJava plugin
Uye zvino ndichaita sei kubhadhara kwangu kuSat. :(
Kana iyo portal inoenderana ne Java Java plugin.
Java plugin haichashandi. Flash inoramba ichitonga netiweki. HTML5 inopa chainopa uye maererano nemitambo semuenzaniso, haina chekuita ne flash.
Iwe hauna zano payo
Chii chidiki html5 chekuita pamberi pechiedza? unogara munyika ipi? O_O
Ini ndinovenga iyi Java plugin inofanirwa kuvandudzwa nguva nenguva, zvikasadaro mitambo kana masiginecha edhijitari mumabhurawuza haashande. Inononoka uye inorema. Java yakatopedza kutenderera kwayo uye inofanira kuenda.
Izvo hazvidziviriki kuyeuka ichi chinyorwa papeji ino:
Mario Molina akadaro
Iyo Java plugin haina kudikanwa kuti utarise mapeji akagadzirwa muJava. Izvo zvaingova zvemaapplet, chimwe chinhu icho vashanduri veJava vasina kushandisa kubva kuma90's.Akagadziridza muJava kubva 2007 uye ini handina kumboona imwe kubvira zvaive chinhu chisina kumboonekwa zvakanaka nemusunguri weJava. Paive neimwe hangover kunze uko asi hachisi chinhu chakanaka kana tekinoroji yakanaka. Kana iyo purofiti yewebhu kusimudzira isiri kupfuudza zvese kugadzirisa kune bhurawuza. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Applet
Pindura kuna Mario Molina